Miralem Pjanic Oo Boos La'aan Ka Heysato Kooxda Barcelona.
Home Horyaalka Spain Miralem Pjanic oo boos la’aan ka heysato kooxda barcelona.
Miralem Pjanic oo boos la’aan ka heysato kooxda barcelona.
Imaatinka Miralem Pjanic ee Barcelona wuxuu ahaa waxoogaa yaab leh Xiddiga reer Bosnian ayaa u yimid Camp Nou isagoo bedelaya Arthur Melo kaasoo, boos joogto ah ka helin Ronald Koeman tan iyo imaatankii magaalada barcelona waxaana inta badan loo isticmaalaa bedel.
Laakiin hadda Pjanic wuxuu umuuqdaa inuu ka go’ay kooxda inteeda kale Uma muuqdo inuu ku dhex milmay barnaamijka, ama habka kooxda ee ciyaarta.
Ronald Koeman ayaa u soo bandhigay meel uu ka bilowdo Elche arbacadii, laakiin 45 daqiiqo ka dib wuxuu ahaa isbadalkii ugu horreeyay Koeman ayaa ka sheegay shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta kadib.
Pjanic wuxuu rumoobay xilligii la qabsiga ee caadiga ahaa, wuuna ka adkaaday dhibaatooyin xagga jirka ah, laakiin weli ma uusan helin jid uu ku galo qorshayaasha Koeman Kaliya wuxuu u muuqdaa inuu ciyaarayo markii Koeman uu u baahan yahay inuu wareego, xitaa markaa wuxuu u muuqdaa inuu ka mid yahay ciyaartoydii ugu horreysay ee laga saaray.
Pjanic ayaa haatan ah ciyaaryahanka 14aad ee Barcelona, marka loo eego daqiiqado la soo uruuriyay. Liiskaas waa mid khiyaano leh, maadaama Sergi Roberto, Gerard Pique iyo Philippe Coutinho ay dhammaantood ka hooseeyaan isaga sababtoo ah maqnaanshaha dhaawacooda.
Mararka qaar, xitaa ciyaartoy sida Riqui Puig ayaa ka horreeyay Pjanic marka loo eego amarka ugu sarreeya, in kasta oo Koeman uu shaqada ka eryay da ‘yarta xagaaga Isaga oo aan dhibaato gelin, Pjanic wuxuu cadeeyay inuusan ku faraxsanayn booskiisa haatan Waa inaan aragnaa inta ay xaaladdani sii soconayso, iyo inta daqiiqo ee uu ciyaarayo marka xigta ee uu bilaabo.
Previous articleJoan Laporte oo ku dhawaaqay kooxdiisa mashruuca ee doorashada barcelona.
Next articleLigerpool oo xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaan doono kabtankooda Jordan Handerson.